Firenena mikambana : Manohana ny fanatsarana ny fanaovan-gazety -
AccueilRaharaham-pirenenaFirenena mikambana : Manohana ny fanatsarana ny fanaovan-gazety
Andro vitsivitsy taorian’ny nanendrena azy, vahiny voalohany noraisin’ny Minisitry ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana, Harry Laurent Rahajason, teny amin’ny toeram-piasany teny Nanisana ny mpandrindra ireo rafitry ny firenena mikambana sady solontenan’ny sampandraharahan’ny firenena mikambana misahana ny fampandrosoana na ny PNUD, Violet Kakyomya. Manga ny lanitra teo amin’ny roa tonta. Andaniny, nampiseho teo anatrehan’ity minisitry ny Serasera ity ny solontena maharitry ny Pnud fa vonona hiara-hiasa ho an’ny fampandrosoana ny asa fanaovan-gazety sy ny fampiroboroboana ny fahalalahan’ny fanaovan-gazety izy ireo. “ Sady fiarahabana azy tamin’ny nandraisana an’izao andraikitra lehibe izao no nahatongavanay no nanamafy ny fiaraha-miasanay aminy ihany koa. Misokatra ny varavaranay amin’izay fampandrosoana rehetra katsahin’ny minisitry ny Serasera hampandrosoana an’io sehatra io”, hoy Violet Kakyomya.
Nisongadina tamin’ny fihaonan’ny roa tonta koa ny fisian’ny fandaharan’asa maromaro mikasika ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalahan’ny fanaovan-gazety eto Madagasikara. Anisan’ny hanohana ny fanabeazam-bohon’ ny mpanao gazety malagasy ny firenena mikambana. Nambaran’ny minisitra, fa efa misy ilay sehatra hiadian-kevitra neken’ny Filohampirenena , azo resahana ao anatin’io avokoa ny hetaheta tiana hanatsarana an’iny Code de la Communication nampisy adihevitra iny.
Hitondra ihany koa ny anjara birikiny amin’ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety ( isaky ny 03 mey) ny firenena mikambana. Any Mahajanga no hanatanterahana ny fankalazana ofisialy amin’ity taona ity. “Efa tapaky ny Pnud sy ny holafitry ny mpanao gazety fa any Mahajanga no hanaovana ny fankalazana. Ao anatin’ny fitohizan’ny raharaham-panjakana, noho ny minisitera miara-mikarakara ny fankalazana dia manohy sy manaja izany izahay », araka ny fanamarihana nentin’ny Minisitra.
Anisan’ireo fandaharan’asan’ny minisitera ihany koa anefa ny fisian’ny fifanakalozana traikefa eo amin’ny mpanao gazety malagasy araka ny vanim-potoana nisy azy. « Mba ho fanaovan-gazety milamina no entina miatrika ny taona 2018 », hoy ihany izy. Amin’ny 06 mey 2017 kosa ny fifampiarahabana sy fifampizarana eo amin’ny samy mpanao gazety eto Antanananarivo. “ Na ny mpanao gazety zokiolona, na ny tranainy na ireo mbola zandry taty aoriana, dia hiray latabatra sy hifampizara traikefa satria mitovy ihany ny asa hatao”, hoy hatrany ny minisitry ny Mcri.